ch 16 လုကာ – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / သမ်မာကမျြး / လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်း / ch 16 လုကာ
16:1 သူသညျလညျးတပညျ့တျောတို့ကလညျး,: "တစ်ဦးကလူတယောက်ချမ်းသာကြွယ်ဝခဲ့, သူသည်မိမိအိမ်ခြံမြေတစ်ဘဏ္ဍာစိုးခဲ့. ထိုအခါဤသူသည်သူ၏ဥစ်စာ dissipated ဘဲလျက်သူ့ကိုမှစွပ်စွဲခဲ့သည်.
16:2 ထိုမင်းသည်သူ့ကိုခေါ်ကလညျး: 'ဤငါသည်သင်တို့ကိုအကြောင်းကြားသောသိကဘာလဲ? သင့်ရဲ့သာသနာတော်ကို၏ account တစ်ခု Give. သင်တို့သည်နောက်တဖန်ငါ၏အဘဏ္ဍာစိုးဖြစ်နိုင်။ ''
16:3 ထိုအခါဘဏ္ဍာစိုးကိုယ်တော်တိုင်အတွင်းကဆိုသည်: 'ငါဘာလုပ်သင့်လဲ? ငါ့သခင်သည်ငါ့ကိုပယ်၏သာသနာတော်ကိုယူပြီးသည်. ငါတူးဖို့လုံလောက်တဲ့အားကြီးသောမဖြစ်ကြောင်းကို. ငါတောင်းပန်ပါ၏လွန်းရှက်ကြောက်ခြင်းဖြစ်၏.
16:4 ဒါကြောင့်ငါမပွုပါမညျဘယျအရာသိ, ငါသာသနာတော်ကိုမှဖယ်ရှားပစ်ခဲ့ကြရသောအခါ, သူတို့သည်အိမ်များသို့အကြှနျုပျကိုခံခြင်းငှါ။ ''
16:5 ဆိုတော့, မိမိသခင်ရဲ့ကိုက်သောအသီးအသီးတစ်ညီတညွတ်တည်းတောင်းဆို, သူကပထမဦးဆုံးဖို့ကဆိုသည်, '' မည်မျှသင်သည်ငါ၏အရှင်သည်ကြွေးဘူး?''
16:6 ဒီတော့သူကပြောသည်, '' ရေနံတစ်ခုမှာတရာအိုး။ '' သူသညျအထံတော်ကပြောပါတယ်, '' သင့်ရဲ့ငွေတောင်းခံလွှာကိုယူ, နှင့်လျင်မြန်စွာ, ထိုင်ပြီးငါးဆယ်ရေးပါ။ ''
16:7 နောက်တစ်ခု, သူတယောက်ကိုပြောပါတယ်, '' သမ်မာတရားထဲမှာ, သငျသညျဘယ်လောက်အကြွေးပြု?'' ထိုအဟုသူကဆိုသည်, '' ဂျုံတစ်ခုမှာတရာအစီအမံ။ '' သူကသူ့ကိုပြောပါတယ်, '' သင့်ရဲ့စံချိန်စာအုပ်တွေယူပါ, နှင့်ရှစ်ဆယ်ရေးပါ။ ''
16:8 ထိုအခါအရှင်မတရားသဖြင့်ဘဏ္ဍာစိုးဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်း, သောသူအမှုဆောင်ပြုမူခဲ့. ဒီအသက်အရွယ်၏သားသည်အလငျး၏သားဖြစ်ကြ၏ထက်သူတို့ရဲ့မျိုးဆက်နှင့်ပိုမိုသတိရှိသောများမှာ.
16:9 ဒါကြောင့်ငါသည်သင်တို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာ, မတရားသဖြင့်၎င်းသုံးပြီးကိုယ်အဘို့မိတ်ဆွေတွေပါစေ, သောကြောင့်, သငျသညျရှေ့သှားကွပွီမည်သည့်အခါ, သူတို့ထာတဲသို့သင်ခံခြင်းငှါ.
16:10 အနည်းဆုံးသောအရာကို၌သစ္စာရှိသောသူမည်သည်ကားဖြစ်ပါတယ်, ကြီးမြတ်သည်အဘယ်သို့ရှိလည်းသစ္စာ. အကြင်သူသည်သေးငယ်သည်အဘယျသို့ရှိမတရားတဲ့ဖြစ်ပါသည်, ကြီးမြတ်သည်အဘယ်သို့ရှိလည်းမတရားတဲ့ဖြစ်ပါသည်.
16:11 သို့ဖြစ်., သငျသညျမတရားသဖြင့်၎င်းနှင့်အတူသစ္စာရှိသောသူဖြစ်ကြပြီမဟုတ်လျှင်, အဘယ်သူသည်မှန်သောအရာကိုနှင့်အတူသင်ယုံကြည်လိမ့်မည်?
16:12 ထိုအခါသင်သည်အခြားပိုင်ရာနှငျ့သစ်စာရှိသူဖြစ်ကြပြီမဟုတ်လျှင်, အဘယ်သူသည်သင်တို့အဘို့ဖြစ်၏သင်သည်အဘယ်သို့ငါအပ်မည်?
16:13 အဘယ်သူမျှမကျွန်သည်နှစ်ဦးမင်းအစေခံနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်. သူတကိုမုန်းနှင့်အခြားခစျြလိမျ့မညျဖြစ်စေဘို့, သို့မဟုတ်သူတအားတွယ်ကပ်နှင့်အခြားမထီမဲ့မြင်ပြုလိမ့်မည်. သငျသညျဘုရားသခငျသညျ၎င်း, ဝတျမပွုနိုငျသညျ။ "
16:14 သို့သော်ထိုဖာရိရှဲတို့, လောဘကြီးခဲ့ကြသူအ, ဤအရာအလုံးစုံတို့ကိုနားထောင်ခြင်းခဲ့သည်. ထိုသူတို့ကသူ့ကိုလှောင်ပြောင်.
16:15 ထိုသူတို့အားဆို၏: "သင်လူတို့မျက်မှောက်၌ကိုယ်ကိုကိုယ်တရားမျှတသူများမှာ. သို့ရာတွင်ဘုရားသခင်ကသင်တို့စိတ်နှလုံးကိုသိတယ်. အဘယျသို့လူချီသည်ဘုရားသခင့်ရှေ့တော်၌စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်ဖြစ်၏.
16:24 ထိုအအော်ဟစ်, ဟုသူကပြောသည်: ‘Father Abraham, take pity on me and send Lazarus, so that he may dip the tip of his finger in water to refresh my tongue. For I am tortured in this fire.’
16:25 And Abraham said to him: '' သည်သားတော်ကို, recall that you received good things in your life, and in comparison, Lazarus received bad things. But now he is consoled, and truly you are tormented.
16:27 နှင့်ဟုသူကဆိုသည်: ‘Then, ဖခင်, I beg you to send him to my father’s house, for I have five brothers,
16:30 ဒီတော့သူကပြောသည်: '' အဘယ်သူမျှမ, father Abraham. But if someone were to go to them from the dead, they would repent.’
16:31 ဒါပေမဲ့သူကသူ့ကိုအားဆို၏: ‘If they will not listen to Moses and the prophets, neither will they believe even if someone has resurrected from the dead.’ ”